नेपाल महिला संघको स्थापना दिवसमा, विद्यालयलाइ नगद रू ५ हजार ५ रुपैयाँ सहयोग ! – ebaglung.com
नेपाल महिला संघको स्थापना दिवसमा, विद्यालयलाइ नगद रू ५ हजार ५ रुपैयाँ सहयोग !
२०७६ श्रावण २४, शुक्रबार १५:३०	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार, विविध
बागलुङ, २०७६ साउन २४ । नेपाल महिला संघ जिल्ला कार्यसमिति बागलुङले आफ्नो ७२ औं स्थापना दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाएको छ । संघले बागलुङ नगरपालिका–४ कुँडुलेमा रहेको मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रम संस्कृत माविमा अध्ययनरत विद्यार्थीको निम्ती आर्थिक सहयोग गरेको छ । विद्यालयमा अध्ययनरत बटुकको लागि एक दिनको खाना खर्च स्वरुप नगद ५ हजार ५ रुपैयाँ सहयोग गरिएको नेपाल महिला संघ बागलुङका अध्यक्ष शकुन्तला शर्माले जानकारी दिइन ।
कक्षा ६ देखी १० सम्म संस्कृत पढाई हुने विद्यालयमा ६५ जना बटुकहरु अध्ययनरत छन । सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा बौल्द नेपाली काँग्रेस बागलुङका सभापति दिपेन्द्र बहादुर थापाले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महिला संघको ठुलो भुमिका रहेको बताए । उनले महिला संघका काँग्रेसको भातृ संस्थाको रुपमा रहेको रमहिला संघले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा सकृय भूमिका निर्वाह गरी गौरवशाली ऐतिहासिक जिम्मेवारी वहन गर्दैै आएको बताए । कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका महासमिति सदस्य कल्पना हमाल पाठक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सहदेव राजभण्डारी, बान.पा ४ का पाटी सभापति सन्तोष जिसी लगायतले स्थापना दिवसको अवसरमा महिला संघले गरेको कार्यप्रति प्रशंसा गरेका थिए। कार्यक्रम नेपाल महिला संघ बागलुङका अध्यक्ष शकुन्तला शर्माको अध्यक्षता सचिव भगवती केसीको स्वागत र सचिव उषा पौडेलको संचालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
नेपालमा पहिलो पटक महिलाको उत्थानको लागि वि.सं. १९७४ मा दिव्यादेवी कोइरालाको सक्रियतामा महिला समिति गठन भएको थियो । त्यस समयका अग्रणी महिलाहरु– योग माया देवी, चन्द्रकान्ता, लक्ष्मीदेवी, तुलजा शर्मा, मेलवादेवी, द्वारिकादेवी चन्द ठकुरानी आदि महिलाहरुको योगदानको आधारमा टेकेर महिला संघको स्थापना भएको हो ।
१९९८ साल आषाढ २१ गते शनिवार योगमाया देवी न्यौपानेको नेतृत्वमा ६८ जनाले राणा शासनको विरुद्धमा तथा सामाजिक सुधारको पक्षमा संगठीत रुपमा जलसमाधी (देहत्याग) गरेर पहिलो महिला संर्घषका रुपमा लिने गरिन्छ । २००३ सालमा आदरणीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको विराटनगर जुटमिल आन्दोलनमा दिव्यादेवी कोइराला, नलीनी उपाध्याय, इन्दिरा आचार्य, कामीनी गिरी जेल चलान (प्रजातान्त्रिक आन्दोलमा संलग्न भएर जेल चलान जाने सम्भवतः प्रथम महिलाहरु थिए ।
२००७ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा मूलुकमा राणा शासन विरुद्धको ठूलो सशस्त्र क्रान्ति भयो ।
उक्त क्रान्तिमा महिला नेतृहरु मंगलादेवी सिंह, दिव्या कोइराला, नलिनी उपाध्याय, इन्दीरा आचार्य, विजया लक्ष्मी, नोना कोइराला आदिले गोप्य रुपमा क्रान्तिका लागि ल्याइएका हतियार राख्ने, घाइतेको औषधो उपचार गराउनुको साथै क्रान्ति सफल पार्न आवश्यक भूमिका निर्वाह गरेका थिए । २००७ सालको क्रान्ति पछि पार्टीहरु स्वतन्त्र भए सोहि अनुरुप नेपाल महिला संघ पनि खुल्ला रुपमा काम गर्न थालेकाे थियो ।
२००८ साल श्रावण २७ गते काठमाडौंको भूगोल पार्कमा प्रजातन्त्रवादी महिला नेतृहरुको वृहत भेला भएको थियो । उक्त भेलाले मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा रहेको कार्यसमितिलाई वैधानिकता प्रदान गरेको थियो ।
अजोडले ग-यो पकुवा पञ्चासे साझेदारी कृषी फर्मको आलु विमा दावीको भुक्तानी !
तीजपर्वलाई भड्किलो र अश्लीलतारहीत नेपाली मौलिकपनमा मनाउन अपील !